Faah faahin:- Dagaal geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka Bakool – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka Bakool
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal xoogan oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dagaalyahanadda Al-shabaab habeenkii xalay ku dhex maray deegaano hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool.
Dagaalkaasi ayaa sida la sheegay yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Ceel-lahelay oo qiyaastii 20km u jira degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Illaa 5 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa la xaqiijiyay inay dagaalkaas ku geeriyootay, halka in ka badan 10 qof kale ay ku dhaawacantay, sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay.
Dadka ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa la sheegay in haatan lagu daaweynayo xarumaha caafimaad ee ku yaalla degmada Xudur, waxaana saakay xaalad deganaanshiyo ah laga dareemayaa goobtii xalay lagu dagaalamay.
Dhinaca kale, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa la sheegayaa inay haatan wadaan dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanada ay Al-shabaab kasoo abaabulaan weerarada.